‘शिरीषको फूल’की सकमबरीको याद आइरहन्छ ‘पागल बस्ती’को शब्दशिल्पले लोभ्यायो
‘ऐलानी’ उपन्यासका लेखक हुन् विवेक ओझा । वादी समुदायमा आधारित ऐलानीले अघिल्लो वर्ष निकै चर्चा बटुलेको थियो । पहिलो उपन्यासबाटै स्थापित भएका लेखक ओझा युवास्रष्टामाझ अध्ययनशीलका रूपमा चिनिन्छन् । ‘कुरा किताब’मा यसपटक आख्यानकार ओझाले आफ्ना मनपर्ने पाँच आख्यान र तीमाथि आफ्ना पाठकीय अभिमत प्रस्तुत गरेका छन् ।
मदनमणि दीक्षितको मास्टरपिस आख्यान ‘माधवी’ भर्खरै मात्र पढें । पढिसकेपछि लाग्यो, ढिलो पढेछु ।
यो उपन्यासमा निकै मसिना कुराहरूलाई दैनिकीसँग मिहिन ढंगले बाँधिएको छ । छोटो समयका लागि उभिएका सामान्य पात्रहरूको अभूतपूर्व दर्शन र प्रभावकारी भूमिकाले मलाई निकै प्रभावित पार्यो ।
उपन्यासले वैदिककालको समयलाई उठान गरेको छ । र, यो पढिरहँदा आफैंलाई त्यो समयमा पुगेको भान हुन्छ । यसको संवाद पक्ष विशेष छ । यसको गहनता र फैलावटका कारण यो किताब एकपटक मात्रै पढेर साध्य छैन । संस्कृत भाषाका शब्दहरूले उपन्यासलाई केही जटिल बनाएको छ ।
उपन्यासमा लामालामा वाक्य संरचनामा छ । साढे ५ सय पृष्ठको यो किताब पढ्न मलाई औसतभन्दा बढी समय लाग्यो । विभिन्न विद्वानहरूबाट माधवी जहिले पनि प्रशंसित हुने गर्छ । केहीले त यसलाई वैदिक साहित्यको आधुनिक स्वरूप मानेका छन् । यसैले केही समयपछि ‘माधवी’ फेरि दोहो¥याएर पढ्ने सोचमा छु ।
२. नरेन्द्र दाइ
मलाई बीपीका सबै कृतिहरू उत्तिकै मन पर्छ । जसमध्ये ‘नरेन्द्र दाइ’ एक हो । मुख्यतः नरेन्द्र, गौरी र मुनरियाको त्रिकोणात्मक क्यानभासमा उपन्यास चित्रित छ ।
यस्तै, कोशी नदीआसपासको जनजीवन, बनारसका गल्लीहरू, बाढीको त्रास पनि उपन्यासमा चित्रित छ । उपन्यासमा राग, प्रेम र वितृष्णाको रङलाई मनोविज्ञानको कुचीले रङ्गाइएको छ ।
समाजमा महिलाको नियति र पुरुषको प्रभाव निकै यथार्थ र प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्तुति र घटनाका मोडहरूले पुस्तक छोड्न मन लाग्दैन । नरेन्द्र दाइ एकचोटि पढ्नेले कहिल्यै बिर्सिँदैन ।
३. शिरीषको फूल
शिरीषको फूल मलाई सधैं मनपर्ने उपन्यासमध्ये एक हो । विसंगतिबीच विकसित जीवन चित्रण र यसको वर्णन लोभलाग्दो छ । यो उपन्यासकी पात्र सकमबरी नेपाली साहित्यमा थोरै स्टाब्लिस्ड पात्रमध्येमा पर्छिन्जस्तो लाग्छ ।
मलाई नेपाली आख्यानमा सबैभन्दा याद आउने पात्रहरूमा शिरीषको फूलकी सकमबरी एक हुन् । पारिजातको शानदार लेखन शैली र कथा भन्ने स्टाइलले शिरीषको फूल विश्वस्तरीय कृति बन्न पुगेको छ ।
विजय मल्लद्वारा लिखित उपन्यास अनुराधामा मनोवृत्ति र मनोदशाको जो वर्णन छ, त्यसले मलाई निकै हिट गर्यो । आफ्नो अहमता र त्यसको दुर्घटना सहन नसकेर घरबाट भागेकी युवती(अनुराधा) र आफ्नै हीनता र मनोदशाले थिचिएको (कोमलमान) उपन्यासका मूल पात्र हुन् ।
यो उपन्यासमा जो मनोवाद,छटपटी र हीनताको तालमेलयुक्त वर्णन छ, त्यो विरलै पढ्न पाइन्छ । यसर्थ ‘अनुराधा’लाई मनोवैज्ञानिक आख्यानभन्दा फरक पर्दैन ।
विजय मल्लको कलम साहित्यका सबै विधामा चलेको छ । के नाटक, के कथा, के उपन्यास र कविता, उनको कलम बराबरी चलेको पाइन्छ । मूलतः नाटककारका रूपमा स्थापित विजय मल्ल निकै सुन्दर आख्यान लेख्न सक्छन् भन्ने उदाहरण अनुराधा हो ।
५. पागल बस्ती
सरुभक्तको उपन्यास ‘पागल बस्ती’ कसैले पढ्न छुटाएको भए पक्कै उसले एक सुन्दर कृति पढ्न छुटाएको छ । यो पुस्तक मैले निकै पहिले पढेको हुँ । आज फेरि दोहो¥याएर पढ्ने योजना छ ।
‘पागल बस्ती’लाई प्रेम, दर्शन र अहमको त्रिवेणी भन्न रुचाउँछु । प्रेमबाट अपमानित महसुस गरिसकेपछि प्रशान्तमा जन्मिएको अहम् र त्यसले जन्माएको आदिगुरु, अनि त्योबाट निर्देशित दर्शन एवम् आदिगुरु र आदिमाताको तर्क बितर्कले उपन्यासलाई निकै प्रभावकारी बनाएको छ।
उपन्यासको विशिष्ट शिल्पका कारण पनि मलाई ‘पागल बस्ती’ खुबै मन परेको हो । पागल बस्तीपछि नै सरुभक्त मेरा लागि मनप्रिय लेखक भएका हुन् । उनको नेपाली आख्यानमा आफ्नै विशिष्टता छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक १६, २०७६, ०७:३६:००